यस्ता छन्, धार्मिक मान्यता अनुसार केटिले गर्न नहुने कार्यहरु
रौतहट बम विस्फोट प्रकरण – आफताब आलाम जेल चलान
नायिका शिल्पा पोखरेललाई साधारण तारेखमा छाड्न अदालतको आदेश
प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बनाउन उपायहरु
घुम्न जाने होइन सुन्दर ठाउँ बल्थली (फोटो फिचर)
सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो सीमा विवादको लिखित जवाफ
नेपालको पत्र, नेपालपत्र
धर्म संस्कृति रोचक लेखहरु
September 26, 2019 September 26, 2019 नेपाल पत्र	0 Comments धार्मिक मान्यता
महिला पुरुष समान हो । हरेक महिलाले गर्ने काम पुरुषले र पुरुषले गर्ने काम महिलाले गर्नुपर्दछ भन्ने मानिसलाई लाग्छ । तर, धर्म शास्त्रले महिला र पुरुषका लागि विभिन्न नियम बनाएको छ । शास्त्रले कतिपय कुरा महिलाले गर्न नहुने भनेको छ । यस्ता काम पुरुषले मात्र गर्नु पर्ने शास्त्रको भनाइ छ । महिलालाई सानो देखाउन वा उनीहरु दक्ष नभएकाले यसरी कार्य विभाजन गरिएको भने होइन । विभिन्न कार्य गर्दा महिलाको निश्चित शारिरीक अंगमा दवाव पर्ने जसले शरीरलाई फाइदा नपु¥याउने हुँदा यसरी कार्य विभाजन गरिएको धर्ममा उल्लेख छ ।
गर्न नहुने कार्यहरु
धार्मिक मान्यता अनुसार महिलाले नरिवल फुटाउनु शुभ मानिँदैन । यसका लागि पुरुषले मात्र नरिवल फुटाउनु पर्ने शास्त्रको भनाइ छ । मन्दिरमा नरिवल फुटाउँदा महिला नभएर पुरुषले मात्र फुटाउने गरिन्छ । यसको कारण भने मन्दिरमा नरिवल फुटाउनु कुनै पनि शुभ कार्यको कामना गर्नु हो । यसरी नरिवल फुटाउँदा एकै पल्टमा फुटेको राम्रो र शुभ मानिन्छ । प्रकृतिले नै महिलालाई भन्दा पुरुषलाई बढी बल वा तागत दिएको छ । महिलाले भन्दा पुरुषले एकै पल्टमा नरिवल फुटाउन सक्ने भएकाले महिलाले मन्दिरमा नरिवल फुटाउनु शुभ नमानिएको हो ।
महिलालाई जनै लगाउन नहुने शास्त्रको भनाइ छ । यज्ञोपवित पनि भनिने जनै पुरुषले मात्र धारण गर्न सक्छन् ।
देवी देवतालाई बलि चडाउने काम पनि महिलाले गर्दैनन् । महिलाहरु धेरै भावुक हुने भएकाले यसरी बली चढाउँदा उनीहरुलाई नराम्रो असर गर्न सक्ने भएकाले धार्मिक मान्यता अनुसार पुरुषले मात्र बलि चढाउनु पर्छ ।
धर्म शास्त्र अनुसार महिलाले ॐ भनिने मन्त्र जप्नु शुभ मानिँदैन । ॐ मन्त्र बोल्दा नाभी क्षेत्रमा दवाव पैदा हुने र यस्तो दवाव महिलालाई राम्रो नमानिने हुँदा महिलाले ॐ मन्त्र नजप्ने धार्मिक मान्यता छ ।
हनुमानको पुजा र स्पर्स
हनुमानलाई ब्रम्हचारी मानिन्छ । यसकारण हनुमानको पुजा महिलाले गर्छन् तर हनुमानको मुर्ती स्त्रीले छुनु राम्रो मानिदैन ।
महिलाले गायत्री मन्त्र पनि जप्नु हुँदैन । शास्त्रका अनुसार गायत्री मन्त्र महिलाले जप्नु अशुभ हुन्छ । गायत्री मन्त्र जप गर्दा शरीरमा पैदा हुने कम्पनले महिलालाई फाइदा नपु¥याउने र पुरुषले सोही मन्त्र जप गर्दा कम्पन पैदा हुने भएकाले महिलाले यो मन्त्र जप नगर्नु भनिएको हो । पछिल्लो समय महिलाले पनि गायत्री मन्त्र जप्न थालेका छन् ।-एजेन्सीको सहयोगमा
← खाली समयमा डेटिङ जाँदा गर्न हुने र नहुने कामहरु
शास्त्रका अनुसार यी राशि हुने प्रेमी प्रेमिका कहिले पनि छुट्दैनन् →
ठगी आरोपमा पक्राउ परेका रुप ज्योतिलाई हाजिर जमानतमा छाड्न प्रहरीलाई पत्र
यस्ता छन् सम्बन्धमा हुँदा गर्न नहुने गल्तीहरु
बम त के पटका समेत नपड्काएको नेता आलमको दावी
हाम्रो स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नका लागि ३० दिनमा २५० पटक उठबस
थाहा पाउनुहोस्, महिलाहरु कुन समयमा यौन सम्पर्क गर्न रुचाउछन् ?
ज्योतिषशास्त्र अनुसार यी दुई राशिका जोडी कहिल्यै छुट्टिँदैनन्
शुक्रबार लक्ष्मी र शुक्र ग्रहको पूजा गरेमा मिल्नेछ यस्तो लाभ
शुक्रबार लक्ष्मी र सन्तोषी माताको व्रत बसी पुजा गरेमा मिल्नेछ यस्तो लाभ
शुक्रबार के के काम गर्दा सफलता मिल्छ ?
चोरीका गाडीसहित २ जना पक्राउ
नेपाली काँग्रेसका लोकप्रिय नेता तथा पूर्व बनमन्त्री शंकर भण्डारीको जीवन